Kukho konke ukuphila yesimanje Sihlala namathonya ayingozi ahlukahlukene. Phakathi kwabo, akusiyo ingxenye owesincane isifo ukuthatha letehlukene, umfutho kanye yinkimbinkimbi. A ngokwempilo yangenyama elihlobene ne yezifo esimiso senhliziyo nemithambo yegazi ngokuvamile usesikhundleni okuholela emhlabeni.
Nokho, isayensi yesimanje akemi namanje. Ososayensi, biochemists baye basungula bese uqhubeke usebenze ukwenziwa kwemithi emisha ezisiza umuntu baphumelele ekulweni nesifo senhliziyo nemithambo yegazi. Elinye iqembu ukuthaka imithi enjalo, ibalulekile ukwelashwa eziyinkimbinkimbi kukhona angioprotectors. Izidakamizwa kuleli qembu zinezikhathi umsebenzi omkhulu ngokumelene ukususwa zibe futhi ukukhuthaza vasodilation, ngcono microcirculation, okuholela ezinye izici ezivamile rheological legazi permeability semithambo. Ukusebenzisa imithi angioprotectors kunciphisa edema izicubu umzimba futhi kusebenze izinqubo. Ukusetshenziswa kabanzi izidakamizwa yaleli qembu atholakala ukwelashwa, izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu angiopathy - sikashukela, rheumatism kanye samathambo isifo sokuqina kwemithambo yegazi, izinkinga ababa nazo emithanjeni (varicose, ukucinana ukuvuvukala), izilonda emithambo yegazi, nezinye pathologies efanayo.
Ngokuvamile, ukuze ulwe izinkinga abasebenzi bezempilo ukunquma "Trental" (analogue zomuthi, by the way, kukhona ezingabizi kakhulu).
Ukwakheka Uphiko nomumo yokukhiqiza
Ingqikithi oyinhloko esebenzayo "Trental" kuyinto pentoxifylline. Abathengi le nomuthi itholakala amafomu ezintathu Ukukhiqizwa: amaphilisi (aqukethe 100 noma 400 mg pentoxifylline) futhi njengoba isixazululo umjovo e ampoules 5 ml (1 ml - 20 mg isithako esisebenzayo). Ngenxa yalokho, i-analog esikhundleni "Trental" ukuba athuthukiswe kusekelwe pentoxifylline nasesikhathini imithamo efanayo (100 no-400 mg).
Pentoxifylline (ingxenye main "Trental") ngcono izakhiwo rheological negazi, okuyinto kancane viscous futhi obukhulu. Futhi, lolu ketshezi evimbela ngokweqile zamagama zegazi, ikhuthaza vasodilation. Ngenxa yalokho, izinga ekuthuthukiseni microcirculation uketshezi begazi ezicutshini (kuhlanganise ubuchopho), kungenzeka nge awokuthi ukuvimbela thrombosis nezitsha sklerotirovanie.
Ngokwesibonelo, "Trental 400" (analogs yayo ngezinga elifanayo) kuthuthukisa kwegazi ezindaweni lapho kunyatheliswa kuphazamisekile. Ingabe umzimba womuntu myotropic vasodilator umphumela (siqala ababuthakathaka, kodwa sona sikhona), kunikeza ukunwetshwa kancane izitsha yenhliziyo. yokwelapha Kuhlanganiswe ne ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kakhulu ngcono isithombe izenzakalo cerebrovascular. Uma isiguli uhlushwa iyiphi Umthambo neuropathy izilonda occlusive (isb, izinyonga), impumelelo ukwelashwa ungaboniswa ukwandisa ibanga uma uhamba, ukunyamalala nokuquleka e amathole ngesikhathi sasebusuku kanye ukungabikho ubuhlungu kuphela.
I nomuthi "Trental" okubonisa ukuthi isicelo (analogs babe namathonya afanayo emzimbeni) kuqhathaniswa ezihlukahlukene. Okokuqala, kungenxa iziyaluyalu kwegazi. Umuthi esithathwayo ukuqeda imiphumela isifo sokuqina kwemithambo yegazi cerebral (nesiyezi, ukukhohlwa, ukungakwazi ukugxilisa), ischemic isifo senhliziyo, kanye nemibandela post-stroke.
Sebenzisa "Trental" analogs izidakamizwa kuboniswe iziyaluyalu ukugeleza kwegazi e imithambo neuropathy nemvelo atherosclerotic ngeziphambeko trophic (izilonda trophic, esibhibhayo). Nangempumelelo buyafaneleka ukusebenzisa iziyaluyalu ocular kwegazi nomuthi, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, izinguquko izimpawu ukonakala ezenzeka phakathi pathologies semithambo zengaphakathi lendlebe futhi sokuzwa bezibona ukwehla.
Kuboniswa lokhu izidakamizwa futhi pathologies yomgogodla, okuhlanganisa ekubhujisweni ezifana unhlangothi umgogodla, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, emgogodleni semithambo, radiculitis, osteochondrosis, waphuka futhi wamemezela balimala eqolo, ankylosing spondylitis.
Ukusebenzisa angioprotectors contraindicated?
Noma yimuphi angioprotector - Analogue "Trental" (kanye, futhi ngokwalo "Trental") - akakwazi ukwamukela iziguli ezine hypersensitivity ezinzima ukuze pentoxifylline, nezinye methylxanthines (pentoxifylline - esuselwe xanthine) noma yimuphi yamathebhu okuyinto elikhona ngesimo ukukhululwa wathola (amaphilisi, imijovo ). ukusetshenziswa Inadmissible yaleli qembu izidakamizwa e ukopha okukhulu yanoma yimuphi umsuka (pentoxifylline incipha igazi viscosity), nokopha kwe-retina esweni, ubuchopho, esimweni acute isilethikusebenza futhi senhliziyo isikhathi. Is contraindicated uma isiguli hypotension (umfutho wegazi ophansi kubantu ingcindezi), kwezinso ukwehluleka futhi isibindi, izilonda emathunjini isisu kanye duodenum 12. Endabeni ukungenelela kuhlinzwa "Trental" futhi analogs yayo ayibeki umncele ngaphambi kwesonto ngemuva kokuhlinzwa.
Contraindicated "Trental" (fanekiso kakhulu) izingane nentsha engaphansi kwengu-18 ubudala, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo.
Imiphumela engemihle engase ibe ku-angioprotectors kokuthola
Ngoba noma yisiphi angioprotectors (analogue "Trental") incwadi yeziyalezo uchaza imiphumela engemihle engase ukuthi ngokuvamile, kodwa kwenzeke. On the ingxenye pheshana emathunjini esiswini kungadala ubuhlungu, isicanucanu, labona ukuhlanza, ukuqunjelwa, uhudo, noma ngaphakathi alternation of la uthi.
Isimiso senhliziyo nemithambo yegazi kungaba ngizikhumbuze ekuhlaseleni angina (esifubeni ubuhlungu compressive egqoke imvelo short-term), tachycardia, hypotension (blood pressure ukwehlisa). komzimba ezifana ukulunywa, ikhanda kanye isiyezi, edema angioneurotic, ukushaqeka anaphylactic. Ngaphezu kwalokho, "Trental" analogue (izibuyekezo umthengi ukwazisa ngakho) ngezinye izikhathi baxabane ezifana iziyaluyalu sokulala sihlale siphapheme, uvalo yanda, ukuquleka, angaboni kahle.
Uma avele izimpawu ngenhla, ukusetshenziswa "Trental" kumelwe ayeke, afune usizo lwezokwelapha, kugeze esiswini. Uma kunesidingo, sebenzisa imithi lingaze.
Uma izinyathelo ezanele kute simo sibuyele kulesetayelekile kungukuthi kuthathwe, ematfuba okuvela zimpawu ezilandelayo:
- ukucanuzelelwa inhliziyo kanye ukuhlanza "ngezizathu ikhofi" (uphawu ukuthi ekuthuthukiseni ukopha kakhulu esiswini);
- okunye ukwehliswa kwezintela wegazi izinkomba;
- nokuqinisa isiyezi;
- okuvela nakwisyncope;
- ukwanda izinga lokushisa lomzimba.
With ukuthuthukiswa lezi zimpawu kubalulekile iphume esiswini, badle izidakamizwa ukwelashwa lingaze futhi ungakhohlwa mayelana nesidingo sokufaka isicelo e anjalo absorbents.
Ukweqiwa ngokweqile: nemiphumela, izinyathelo ukubhekana nabo
"Trental" umuthi nolaka ngokwanele futhi ukweqisa izidakamizwa ke kungase kubabangele nemiphumela emibi ngendlela efanayo. Izimpawu ngasocansini ekutholeni ngemithamo enkulu nomuthi; kukhona isiyezi, isicanucanu hypotension (ukuwa wegazi), tachycardia (kwenhliziyo), arrhythmia (ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile), isikhumba ububomvu, lutho, Ukudlikizela, Ukugodola. Uma usola ukweqisa izidakamizwa, "Trentalom" Kufanele uyeke ukuthatha ke futhi bafune usizo lochwepheshe bezokwelapha. Ukwelashwa kuleli cala kuhloswe asekela ezingeni of wegazi kanye umsebenzi zokuphefumula. Uma nokuquleka abakhona, ukuze kususwe zabo zisetshenziswa diazepam.
Lapho izimpawu zokuqala ulapha ngokweqile (nesicanucanu, ukujuluka, cyanosis) kudingekile ukunikeza isikhundla engezansi ekhanda nasemzimbeni engenhla. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe umgudu.
Analogs "Trental" amaphilisi
Uma ukhetha Analogue engcono "Trental" amaphilisi, ngokubona Ochwepheshe abaningi neziguli ngeke bukhomba nemithi "Agapurin". Nendawo empikiswaneni salo Slovakia, kodwa naphezu imvelaphi amazwe, ngentengo ikhona umphakathi nge ezihlukahlukene lengenako. Iyatholakala "Agapurin" e imithamo emithathu - 100, 400 kanye 600 mg lomcebo asebenzayo.
It is eyaziwa kahle ukulungiselela "kuthiye ukukhula", okuyinto i-analog "Trental". Ngokuthakazelisayo, lokhu izidakamizwa futhi etholakala umthamo mg 600 isithako esebenzayo. Imithi kanye umthamo pentoxifylline ungakwazi ukubhekana ngendlela efanele futhi esheshayo nezifo eziyinkimbinkimbi kakhulu ezihlobene ne-kwegazi kahle. "Kuthiye ukukhula" Abasebenzi bezempilo ngokuvamile ezinqunyiwe angiopathy sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, kwakheka imithambo yegazi cerebral, ngoba obusebenzayo ubuthulu cuphuluza isifo semithambo. A yi omuhle usebenzisa "kuthiye ukukhula" ingatholakala ukuhlaselwa ischemic lezivakashi, esikhathini emumva isilethikusebenza, ekulweni iziyaluyalu cerebrovascular nezifo Raynaud sika. Ngempumelelo lokhu Analogue "Trental" amaphilisi futhi uthi ukwehluleka oyingozi futhi ezingalapheki kokuphakelwa kwegazi retina esweni futhi.
Kukhona analogue of "Trental", futhi kwezinye ngemithamo isithako esebenzayo eyinhloko. 200 no-400 mg pentoxifylline aqukethe imithi efana "Trenpental", "Pentamon", "Pentilin" futhi "Pentilin Forte", "Pentomer", "Pentogeksal", "Pot", "Fleksital". Uhlu Kusengenzeka ukuze uqhubeke.
Nokho, Analogue eshibhe "Trental" - okungukuthi, ngaphandle kokungabaza, "Pentoxifylline." ukukhulula ifomu uma kuziwa amaphilisi - 200 no-400 mg pentoxifylline. Lokhu nomuthi kufanele uqaphele ukuthi, ngaphezu kolunye nemiphumela 'Trentalu ", lokhu izidakamizwa kungabangela meningitis aseptic, paresthesia, ukundindizela, ukuhhema, i-hepatitis cholestatic. Futhi kwezinye iziguli ngemuva kokuthola "Pentoxifylline" zingavela ezomile emphinjeni, ukoma, lacrimation, ngeziphambeko noma izinguquko ukunambitheka emizweni. Abathengi ezingajwayelekile, kodwa ingase ikhononde mayelana nokubonakala conjunctivitis, laryngitis, Earache. Ngaphezu kwalokho, okulingana Russian "Trental" avuse uyakwazi kwegazi, ukopha ukushuba izitsha cutaneous, obuhlukahlukene anobuthi epidermal necrolysis.
Ezimweni ezimbi kakhulu, uma kukhona isidingo imijovo, abasebenzi bezempilo ngokuvamile uthanda ukwakhiwa ezifana "Pentilin", "Lattre" (uhlobo ukumnika), "Agapurin", "Pentoxifylline." I bioavailability zonke lezi izidakamizwa ivame ukuba 98%. "Agapurin" - fanekiso ukuba "Trental" e ampoules - ngokuvamile lisetshenziswa amacala olunzima kunalo lonke ake kwegazi cerebral, ne sikashukela angiopathy imvelaphi. Esinye isici esibangela isicelo "agapurin" umjovo - nokuvuselelwa iziguli ngemva kokuhlaselwa senhliziyo, unhlangothi, ukuhlaselwa ischemic.
Kaningi-ke kusetshenziswa "Pentilin", njengenhlangano Analogue of "Trental". Ochwepheshe bakholelwa ukuthi kule nokulungiselela value ephelele imali.
ikhasimende ukufuneka ikhambi ukumnika "Lattre". Umuthi itholakala imithamo emithathu - 100, 200 no-400 mg. Ngaphezu kwalokho izigameko ezingezinhle ezavela eyinqaba "Trentalu" uyakwazi ingqondo ekuthuthukiseni leukopenia, thrombocytopenia, pancytopenia.
Ngokuvamile, uma ufuna ukukhetha Analogue "Trental" ngoba umjovo noma ukumnika, lo mkhuba kungenzeka kanje: kuqala, "Pentoxifylline" njengoba umnikazi we ngemali ephansi kakhulu, bese "Pentilin", lapha "Latro" njengoba nomuthi, nge ehlukahlukene yasakazwa yemiphumela emzimbeni womuntu . Zonke lezi analogs kukhona inzuzo esengeziwe intengo ngaphandle "Trental", kanye bioavailability wabo kuyafana ukuthi we "Trental", futhi ngezinye izikhathi ephakeme.
Sokuphuzisa zemithi ye "Trental" futhi analogue yayo
I-Tablet ifomu "Trental" esithathwayo ngomlomo, ngaphandle ukuhlafuna noma engenangqondo. Kwenze emva kokudla, izikhathi 2-3 ngosuku. Isikali - kuncike imiyalelo udokotela ukuba khona - kungenzeka kusukela 100 kuya 400 mg. 1200 mg - esiphezulu umthamo zonke izinsuku we nomuthi. Ukushayela yokwelapha ekwelapheni ngayinye nesineke umuntu ngamunye yakhelwe, ukuphathwa zingase zithathe isikhathi esisukela 2 amaviki kuya ezinyangeni eziningana.
Imijovo "Trental" ukulungiselela (analogs kuleli cala angasebenza isikimu ezahlukene) kufanele sinikezwe ngemithambo yegazi, bolus noma ukumnika. Esimweni sokuqala (jet) 1 ampoule of nomuthi iqondiswa imizuzu okungenani 5. Inqubo wenziwa izikhathi 1-2 emini.
Ukuze silungiselele drip, umuthi inani kusuka 1 kuya 6 ampoules exutshwe nosawoti noma amaphesenti 5 glucose. Inkathi isingeniso le ngxube - up 1 ihora. Beka weThrojani nezikhathi 1-2 emini. Ubuningi zingakapheli izinsuku amaconsi ufake kuvunyelwe 1200 mg nomuthi (12 ampoules).
Angioprotector "Lattre" - fanekiso ukuba "Trental" nge spectrum ezibanzi yesenzo - asetshenziselwa ukwelapha ku scheme lalo. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-ekuphathweni emthanjeni. Inkambo yokwelashwa ngayinye nesineke ngabanye eba kudorhodere, ikhumbula esisindo lomuntu bese kobukhulu isimo sakhe. Bottle "Latro" (200 ml) I-umjovo ku drip emthanjeni amahora 1.5-3. Uma kungekho izigameko ezingezinhle ezavela ingekho, kungenzeka ukwandisa umthamo kuya 400-500 ml nomuthi.
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa Analogue "Trental" ukusetshenziswa kwamukelekile izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Kulokhu, umthamo kancane ngempumelelo ibalwa kilogram of isisindo isidumbu sengane ngayinye. Ngokuvamile, izingane zidinga ukuthola 5 mg izidakamizwa amakhilogramu esisindo ngayinye.
Imibono ephathelene "Trentale" futhi analogue yayo iziguli kanye abasebenzi bezempilo
Njenganoma yimuphi Analogue "Trental" futhi ngokwalo ngempumelelo nomuthi izifo ngokwanele sina futhi pathologies e isimiso sokujikeleza kwegazi. Nokho, imiphumela emibi izidakamizwa ezinjalo eziningi. Inani elanele iziguli ukuthatha angioprotectors (futhi "Trental" ngokukhethekile) ngesikhathi ukuvuselelwa hlupheka ukumelwa inhliziyo nokushaywa unhlangothi. Ezimweni eziningi, imithi iye yaqinisekisa high izici izidakamizwa. Nakuba ngezinye izikhathi ihlangabezane izibuyekezo mayelana umsindo ezindlebeni, iwe wegazi.
Iqembu ahlukene iziguli, "Trental" iqondiswa for ekwelapheni ukulahlekelwa kukuzwa. Iningi Izibuyekezo lezi abasebenzisi ababe isiqondiso esihle.
I contraindications nemithi - Ukukhulelwa kanye lactation. Nokho, ngokuvamile i-gynecologists linqume izidakamizwa omama abakhulelwe ukuba ngcono kwegazi futhi izicubu umsoco. Iqembu ahlukene iziguli wayalwa ukuba athathe "Trental" njengoba isilinganiso izifo.
Ngokuvamile, uma "Trental" (njengoba ngempela yimiphi okulingana yayo) Kuzoqokwa ngumuntu ukunakekelwa kwezempilo uchwepheshe ofanelekayo futhi okufanayo ukwelashwa lwemithi ezothuthukiswa, bese ingozi nemiphumela engathandeki yalawo maphilisi uzobe incishisiwe, kanye izidakamizwa ezizoba ephumelela kunazo.
U-Anita. igama Meaning
Llayers Ukwesaba: ukuhamba
Uma unqobe isithukuthezi, yini okufanele uyenze? Amasayithi of isithukuthezi
Izinhlobo Zokwephulwa Kokuphatha
Ibhange "West": ukubuyekeza amakhasimende futhi Ochwepheshe
Indlela tie ilungelo Pareo ogwini noma inkampani?